निरु त्रिपाठी print
हाम्रो देशको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमा ‘कार्य क्षमताको अभाव छ’,
सुशीला कार्की “खराब आचरण” भएकी एक महिला प्रधानन्यायाधीश हुन्।
प्रधानन्यायाधीश सुशीलाले ‘न्यायाधीश’हरुलाई आफूले भने जस्तो आदेश फैसला गर्न निर्देशन दिएकी छिन्।
कृपया, नझुक्किनु होला। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई मैले लगाएको अभियोग होइन। यी माथि उल्लेख तीन बुँदा साथै अन्य दश बुँदा सहित १३ बुँदाको महाअभियोग सत्तारुढ काग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ साँसदले हस्ताक्षर गरेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई लगाइएको महाअभियोगको केही झलक हो यो। महाअभियोग लगाउन धेरैनै सजिलो रहेछ यहाँ। फितलो र मनगढन्ते बुँदाहरु ९, १० वटा बनाउने अनि एक दुईवटा सत्य देखिएका कुराहरुलाई मिसाएर ढ्याङ् महाअभियोग ठोकिदिने। अभियोग पनि होइन महाअभियोग, अपराधी पनि होइन महाअपराधी घोषणा गरिदिने त्यही पनि अपराधीहरुलाई होइन न्याय दिने महा(प्रधान)न्यायाधीशलाई नै स्वतःकस्तो आँट हो यो हाम्रो सरकारको। न्यायदिने न्यायपालिकालाई कालो देख्ने यो कस्तो सेतो व्यवस्थापालिका र कार्यपालिका हो ? अरुलाई पुरै कालो देखेर महाअभियोग लगाउन सक्नेहरु थाङ्नामा नसुतेर नै हुर्केको जस्तो छ। सुनौँ सबैजनाले र हाँसौ एकछिन सुशीला कार्की खराब आचरणको र उनमा कार्य क्षमताको अभाव भयो रे, तर उनीहरु चाँहि असल आचरण र ३२ गुणले सम्पन्न छन् रे। यही गुणवान् भएकै कारणले गर्दा उनीहरुले महाअभियोग लगाउने सामथ्र्य बोक्छन् रे।
प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीलाई पहिलेनै थाहा थियो उनको विरुद्धमा व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुदैँछ भनेर। सांसद भवनमा नारदमुनीहरु प्नि टन्नै थिए होला। घ्यू चाट्ने दाउले एउटा र उता कुरा त लगाउन भ्याएकै होलान्। तर पनि यो कुरा सुन्दा सुन्दै उनी न त कसैको दैलो ढकढकाउन गइन् , कसैको खुट्टा समात्न। बरु प्रधानमन्त्रीले पठाएकोदूतलाई समेत भेट्न इच्छु देखाइनन्। उनलाई राम्ररी थाहा थियो आफ्नो काम कसरी गर्नुपर्छ र कानुनले के भन्छ भनेर। यती लामो वकालत र न्यायधीसको अनुभवले उनलाई एक न्यायिक मूर्ति बनाइसकेको थियो। उनको कार्यकाल एक महिनाभित्र सकिदैथियो। न त उनमा लोभी पापी मन थियो न त सत्ताको मोह। लाखौँलाई गीतामा हात राखेर सत्य बोल्न लगाएकी कार्की स्वयंम् एक गीता बनिसकेकी थिइन। त्यसैले पनी उनले यो छल, कपट, यो लोभ र सत्तालाई नजिकबाट हेरिसकेकी थिइन र भोग्दा उनलाई त्यति पीडा भएन। उनी सदाझैँ मुस्कुराउँदै निडर र अटल भएर न्यायलय पुगेकै थिइन् र न्यायोचित फैसला सुनाएकै थिइन् सुडान घोटालाको। न त उनी यो महाअभियोगबाट विचलित भएकी छिन् न त उनी यो अग्नि परीक्षा दिनलाई पछि हटेकी नै छिन्।
हामी जनताहरुले प्रधानन्याधीस सुशीलालाई अग्नि परीक्षा लिन लगायो भनेर अचम्म मान्नु जरुरी नै छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने यो खबर जब मिडियामा आयो मलाई कुनै आश्चर्य लागेन किनकी मैले हाम्रो नेताहरुबाट ठूलो राम्ररो चमत्कारी कुराको अपेक्षा नै गरेको थिइन। उनीशरुको सोच र निर्णयहरु यस्तै इतिहासले धिक्कार्ने र हाँस्ने खालको नै हुन्छ भनेर म त पहिलेदेखिनै सचेत थिइ। यदि उनले जादाँ जादै अर्को देशको हितमा तर नेताको अहितमा कुनै फैसला सुाएर गएको खण्डमा यदि उनको हत्यानै भएको भए पनि त्यो आचार्यमान्नु पर्ने केही कुरा हुँदैन थियो मेरो लागि किनकि आजकाल मेरो देशमा यस्ता यस्ता कुराको भविष्यवाणी गर्न केही असजिलो छैन।
निर्वाचित व्यवस्थापिका २ सय ४९ सांसदले महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ र आज सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगायो भनेर फुर्केर बस्नेहरु हो अहिलेदेखिनै सोचे हुन्छ तिमीहरुले पनि कतिखेर कहाँ महाअभियोग खेप्न पर्ने हो भविष्यमा भनेर। तिमीहरुले के विवेकमा हस्ताक्षर गरे त्यो तिमीहरुले नै जानुन् तर यो लोकतन्त्रमा एकतन्त्रिय शासकमात्रै चल्ने हो भने अदालत किन चाहियो, न्यायपालिकाको के काम ? बल्लबल्ल देशले एउटा महिला प्रधानन्यायाधीश पाएको थियो , हामीले इतिहास बनायौँ, नारी पुरुष बराबर, सुशीला कार्कीले राम्रो काम गरिरहेकी छिन्, हो यस्तै हुनुपर्छ न्याय गर्ने तरिका भनेर घोक्रो फुलाउनेहरु आज किन महाअभियोगको प्रस्तावमा सहमति देखाउँदा लाज नलागेको।
भनिन्छ स्वतन्त्र न्यायपालिका, निर्वाचित व्यवस्थापिका र सक्षम कार्यपालिका लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मुल अंग हो। तर यहाँ न न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनपाएको छ, न निर्वाचित व्यवस्थापिका व्यवस्थित हुन पाएको छ त न त सक्षम तरिकाले लोकतान्कि विधिबाट कार्यपालिकाको कार्यन्वयन भएको छ। यदि राजनैति नै गर्ने हो भने कृष्णाको स्टायलमा राजनैति गर न किन सकुनी र कौरव भनी हिडिरहेछौ।
डिआइजी नवराज सिलवालको आइजिपी नियुक्तिविरुद्ध दिएको रिटमा एकपक्षीय आदेशमा मात्रै यति ठूलो कदम चालेको हो भने डिआइजी नवराज सिलवाल चुप लागेर बस्न आवश्यकता पनि छैन अहिले। यदि तपाइँको कारणले पनि यसो भइरहेको छ भने र तपाइँ देश , जनता र न्यायको पक्षमा ओकालत गर्नुहुन्छ भने यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनुस्। तपाइँको स्वाभिमान, तपाइँको निर्भिक निर्णयहरु, बहादूरपन, निष्ठा आफैँमा सुन हो भने यो महाअभियोगको विरुद्धमा उभिदाँ सुगन्ध दिनेछ। तपाइँको सही मुल्याङ्कन जनताले गरिसकेका छन् र तपाइँको नियुक्ति अदालतले होइन स्वयंम् जनताले आन्दोलन गरेर भए पनि जिताउनेछन्।
अन्ततः सुशीला कार्की ज्यू , तपाइँ जस्तो छ हामीलाई स्वीकार्य छ। यस्तै अटल र निर्भिय भएर रहनुस् र यो अग्नि परिक्षाबाट नडराउनुस्।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, बैशाख २१, २०७४ १३:०१:४१